४९ वर्षमा पनि हट तब्बुले बिहे नगर्नुको कारण अजय देवगन ! – Ramailo Sandesh
४९ वर्षमा पनि हट तब्बुले बिहे नगर्नुको कारण अजय देवगन !
दुई कुराले बलिउड अभिनेत्री तब्बुको प्रशंशा हुन्छ, जोडदार अभिनय अनि फेसनेवल लुक्स । तब्बुका फ्यानहरु उनको अभिनय र सुन्दरताका अलवा फरक फेसन सेन्सका पनि पारखी हुन् ।
अवार्ड कार्यक्रमदेखि अन्य समारोहहरुमा पनि तब्बुका स्टाइलिश र फेसनेवल लुक्सले धेरैको ध्यान खिचिरहेको हुन्छ । ४९ वर्षकी तब्बु परम्परागत कपडादेखि वेस्टर्न आउटफिटमा पनि उत्तिकै आकर्षक लाग्छिन् । त्यस्तै, उनी आफ्नो छालाको विशेष स्याहार गर्छिन् ।
माथिको तस्विरमा तब्बुले लाइट कलरको सर्ट ड्रेस लगाएको देखिन्छ, अफ सोल्डर सर्ट ड्रेसमा उनी निकै सुन्दर देखिन्छिन् । उनीसँगैका धेरै अभिनेत्रीहरु विवाह गरेर सेटल भइसकेका छन् तर उनी अझै पनि अविवाहित छिन् ।
उनले पछिल्लो पटक आफ्नो विवाह नहुनुको कारण अजय देवगन भएको बताएकी थिइन् । २५ वर्ष अगाडि फिल्मी पर्दामा यो जोडी निकै हिट थियो । फिल्म विजय पथमा उनीहरुको पहिलो भेट भएको थियो ।
उनले भनेकी थिइन्,‘आज पनि अजय मेरो मिल्ने साथी हो । उसलाई भेट भएपछि मैले उ बच्चा जस्तो स्वभाव भएको माने । उ मलाई विभिन्न कुराहरुबाट जोगाउन खोज्थ्यो । कोही जवान युवालाई उसले मेरो नजिक आउनै दिएन । त्यही कारण पनि हुनसक्छ म अझै अविवाहित छु ।’ उनको यो भनाइले बलिउडमा निकै चर्चा पाएको थियो ।